Kuphi ukuqala ukufunda isiNgisi? Lo mbuzo owabuzwa zonke Wabasaqalayo abafisa nokuzwisisa ilimi lokuhlanganisa zokuxhumana ngamazwe. Abanye abantu badinga-ke ibhizinisi, omunye yokuxhumana umuntu kwezokuvakasha, nokho, ukuthi isimo sinjani, konke ekuqaleni kukhona ezimpambanweni zomgwaqo futhi abazi kanjani ukuze ulwazi kahle.
Ukufunda isiNgisi kusuka phansi - kuba, okokuqala kunakho konke, - ukuphikelela nokuzimisela ukusebenza ngokwabo. Phela, nje ukukhumbula imithetho - a kuwukusika elijikayo, ingxenye umsebenzi. Futhi kukhona yokubiza, kanye nesidingo anhlobonhlobo silulumagama, nokuningi. Konke lokhu kuyodingeka ukuchitha isikhathi hhayi kuphela, kodwa futhi ukuphoqa, ukuzama ukuze azihlele, musa ukuchitha isikhathi ize futhi silokhu silwela ukuthola entsha. Phela, ulimi - ukuziphilisa, ezihambayo ikhemikhali uyashintsha, unezela amafomu amasha izwi, kuphinyiswa kwemagama, izitembu. Ukuze ubambe ulimi uqobo, kubalulekile ukuba njalo ugaye.
Kuphi ukuqala ukufunda isiNgisi lapho sesibhekene nesimo ulimi lokuqala? Okokuqala, kudingeka sithole indlela yokukwenza - wedwa noma iqembu izifundo. ubuchwepheshe besimanje, i-Inthanethi, asivumela ukufunda ulimi ukude - umuntu nerejista kwisayithi, uthola ukwaziswa ezemfundo, wenza imisebenzi, futhi-ke uyohlolwa uthisha uyakwazi ukulalela bese ubuka amafayela alalelwayo video. Kule ndaba, umbuzo kanjani ukufunda isiNgisi, musa ukwethula noma ibuphi ubunzima ethile. Ngokungangabazeki, ubuchwepheshe obusha - lokhu kancane Nokho, iningi labafundi ukukhetha indlela yokuxhumana bukhoma nathishela, yini plus eziqondile.
Ngaphambi ukhetha isikole English, kubalulekile ukwenza imibuzo ngokusebenzisa abangani ukuthola izibuyekezo izikhungo ezahlukene. izindlela eziningi zokufundisa ezikoleni ulimi ulimi ziyahlukahluka. Ngisho umbuzo ukuqala ukufunda isiNgisi lapho, ixazululwe ngezindlela ezahlukene - abanye ngokwesiko uqale nge zamagama, futhi abanye bakholelwa ukuthi kubalulekile ukuzigcina umfundi ngolimi ngokulalela inkulumo ke yokubiza baba nezinkinga.
Ngakho, kuyafaneleka ezibuza ngalokho ohlangothini zezimali mayelana nodaba emva esikoleni lokuzikhethela. Iqiniso lokuthi zonke zibe isimiso ezimele yokukhokha izifundo. Othile uthola imali inyanga ngayinye, umuntu phezu ezingeni elithile, elinye libe ngelika-isifundo ngasinye. Bala malini imali eyatholakala ngenyanga (for lula ukuqhathanisa), ungakwazi kalula pick out okungabizi price range. Uma lokhu esichaziwe kakade, bese ungakwazi uqhubekele iphuzu eliyinhloko - esifundweni sokuqala.
Ngokuvamile ezikoleni eziningi English likhululekile, ukuboniswa emikhulu. Esifundvweni sekucala ungakwazi ukuhlangana obufunda nazo bese uqhathanisa mayelana amakhono abo. Uma othile ezingeni eyinhloko sesivele umqondo kwetinhlavu tento izikhathi imfundamakhwela ezingeni e zamagama kuyoba nasengqondweni ungakhululekile ngaphansi kwalesi simo. Esikhathini esizayo, kukhona namanje igebe elikhulu phakathi abafundi nabo futhi phakathi nathishela, lokunguye sizogxila kakhulu 'eziphambili "leqembu. Ukuba sabangafundile kule ndaba - kusho ukuchitha isikhathi. Uma ezingeni iqembu kuyafaneleka - qhubeka!
Njengoba inketho ungase ucabangele ikhaya lokufundiswa okukhethekile. Uma ungazi ukuthi ziqala ukufunda isiNgisi lapho, ungakwazi ukusebenzisa othisha engenayo. Nokho, kukhona inezici ezithile ezingathandeki. Umuntu ufunda ulimi elilodwa-on-one nathishela, zibancishe ithuba ukuxhumana ingxoxo ebanzi. Kule ndaba, kukhona ukuphikiswa kucace - thishela lihlale liqinisile, futhi umfundi - cha. Nalapho behlangene bebaningi, izinkinga ezifana nale. Ngisho noma oyibeke amaphutha waqaphela ekhaya, ekilasini ukuxoxa nabo, lapho bekuzwa "iphuma" ngcono kakhulu.
Ungafaki isitembu eyodwa noma enye indlela afunde ulimi, kufanele kusho ukuthi ngaphezu kwesigamu impumelelo izuzwe ngezithukuthuku ngokukhuthazela kwabo siqu nokuphikelela, kanti bonke abanye - izolandela.
Simokwenta ngesiNgisi: licaciswe, eside, isikhathi esiphelele kanye kakhulu-eside
Siyini "embundwini"? Incazelo ukusebenzisa izici inkulumo
Yini ukuletha kusukela Thailand: amathiphu namasu abahambi
Uhulumeni iSigele: imisebenzi. Ukudalwa iSigele
E. coli e ukwelashwa smear kanye nemiphumela